နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > Cnc မဂ္ဂနီစီယမ်အလွိုင်းအစိတ်အပိုင်းများ(13 များအတွက်စုစုပေါင်း Cnc မဂ္ဂနီစီယမ်အလွိုင်းအစိတ်အပိုင်းများ ထုတ်ကုန်များ)
Cnc မဂ္ဂနီစီယမ်အလွိုင်းအစိတ်အပိုင်းများ - တရုတ်ထံမှထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း
ကျနော်တို့တရုတ်ထံမှ Cnc မဂ္ဂနီစီယမ်အလွိုင်းအစိတ်အပိုင်းများ ထုတ်လုပ်သူ & ပေးသွင်း / စက်ရုံအထူးပြုနေကြသည်။ အရည်အသွေးမြင့်မားအဖြစ်အနိမ့်သောစျေးနှုန်းနှင့်အတူလက်ကား Cnc မဂ္ဂနီစီယမ်အလွိုင်းအစိတ်အပိုင်းများ / စျေးပေါ, တရုတ်ထံမှအမှတ်တံဆိပ်ဦးဆောင်သည့် Cnc မဂ္ဂနီစီယမ်အလွိုင်းအစိတ်အပိုင်းများ များထဲမှ Ruizhun Precision Metal Co., Ltd. ။
tag ကို: စက်မှုအစိတ်အပိုင်းများနှင့်အစိတ်အပိုင်းများ , မဂ္ဂနီစီယမ်အလွိုင်းများစက်မှုအစိတ်အပိုင်းများ , မဂ္ဂနီစီယမ်အလွိုင်းများကုသမှုပက်ဖြန်း
tag ကို: ဖိအားနည်းပညာ Casting Die , မဂ္ဂနီစီယမ် Casting Die , အမြဲတမ်းမှိုအပိုအစိတ်အပိုင်းများ Casting
အဆိုပါသေဆုံး-သတ္တုများပုံသွန်း စက်မှုလုပ်ငန်းမှာ "မဂ္ဂနီဆီယမ်အသက်အရွယ်" ကမ္ဘာကြီးကိုနှင့်ဒေသတွင်းအစိုးရများထဲသို့ဝင်ထားပါတယ်, သုတေသနဓါတ်ခွဲခန်းအဖြစ်မော်တော်ယာဉ်ထုတ်လုပ်သူများ, သေဆုံး-casting...
tag ကို: မြင့်မားသောဖိအားအစိတ်အပိုင်းများ Casting ကွယ်လွန် , မဂ္ဂနီစီယမ် Market က Casting ကွယ်လွန် , မဂ္ဂနီစီယမ် Die Cast ကိုအစိတ်အပိုင်းများ
tag ကို: မဂ္ဂနီစီယမ်သတ္တုစပ်များကိုလေကြောင်း , သတ္တု၏ Surface က Finish ကို , Mini ကိုမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ပေးသွင်း
tag ကို: အလွိုင်းများပက်ဖြန်းလုပ်ငန်းစဉ် , သတ္တုမှုတ်လိမ်းကုသမှု , အီလက်ထရောနစ်ထုတ်ကုန်များ၏ကြမ်းပြင်ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း
သတ္တုမှုတ်လိမ်းကုသမှု, အဆိုပါမျက်နှာပြင်အပေါ်ယံပိုင်းကုသမှုနည်းပညာသုတေသနနည်းလမ်းများကိုအများကြီးဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါမျက်နှာပြင်အင်္ကျီကိုအဓိကအားဖြင့်အော်ဂဲနစ်နှင့်အထူးကုတ်အင်္ကျီနှင့်သတ္တုအင်္ကျီကိုခွဲခြားထားပါသည်။ အော်ဂဲနစ်နှင့်အထူးအင်ျကြီကို epoxy...
tag ကို: သတ္တု၏ပက်ဖျန်းတဲ့ Surface , မဂ္ဂနီစီယမ်အလွိုင်း Precision အစိတ်အပိုင်းများ , မဂ္ဂနီစီယမ် Automotive Casting Die
Semi-အစိုင်အခဲပြည်နယ်ဆေးထိုးသေဆုံးသတ္တုများပုံသွန်းစက်မှမဂ္ဂနီဆီယမ်အလွိုင်းအစိတ်အပိုင်းများ, မဂ္ဂနီဆီယမ်အလွိုင်းအပူ ချ. semi-အစိုင်အခဲသေဆုံး, မြင့်မားသောအပူချိန်နှင့်မြင့်မားသောဖိအားဆေးထိုးမှိုတန်ဆာအောက်,...
tag ကို: မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်လေယာဉ်မဂ္ဂနီစီယမ်အလွိုင်းထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း , စိတ်ကြိုက်စက်မှုအစိတ်အပိုင်းများ , CNC အလွိုင်းအစိတ်အပိုင်းများ
မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်အစိတ်အပိုင်းများ, CNC အပြောင်းအလဲနဲ့အဘို့အ OEM CNC စက်ဆက်စပ်ပစ္စည်း, ကွန်ပျူတာဂဏန်းထိန်းချုပ်မှုစက်ကိရိယာတခုဖြစ်တယ်, program တစ်ခုထိန်းချုပ်ထားအလိုအလျောက်စက်ကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။ ထိန်းချုပ်မှုစနစ်အားယုတ္တိနည်း,...
tag ကို: Precision CNC စက်ပစ္စည်း , CNC စက်အော်ပရေတာ , CNC Precision စက်ပစ္စည်း
numerical ထိန်းချုပ်မှုစက်ကိန်းဂဏန်းထိန်းချုပ်မှု tools များနှင့်အတူစက်ကိုဆိုလိုသည်။ CNC အဆထိန်းချုပ်စက် tools တွေကိုအများအားဖြင့်, G ကုဒ် NC machine language ကပရိုဂရမ်များနှင့်ထိန်းချုပ်ထားရသည်။ အဆိုပါ NC စက်, G ကုဒ်ဘာသာစကား Cartesian...
tag ကို: CNC စက်ကုန်ပစ္စည်း , CNC Mills စက်အစိတ်အပိုင်းများ , CNC စက်ပစ္စည်းန်ဆောင်မှုများ
CNC အပြောင်းအလဲနဲ့: tool များ၏အရေအတွက်ကိုလျှော့ချပြီးရှုပ်ထွေးအစိတ်အပိုင်းများ processing ရှုပ်ထွေးလက်ဆောင်မလိုအပ်ပါဘူး။ ငါတို့သည်အစိတျအပိုငျးမြား၏ပုံသဏ္ဍာန်နှင့်အရွယ်အစားကိုပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်,...
မဂ္ဂနီစီယမ်အလွိုင်းအစိတ်အပိုင်းများ ချ. သေဆုံး အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
တိကျစိတ်တိုင်းကျစေမဂ္ဂနီစီယမ်အလွိုင်းအစိတ်အပိုင်းများ Casting Die အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
OEM Service ကို High Quality CNC စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
မဂ္ဂနီစီယမ်အလွိုင်းအစိတ်အပိုင်းများ Casting semi Solid သေ အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်အစိတ်အပိုင်းများအဘို့အ OEM CNC စက်ဆက်စပ်ပစ္စည်း အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အီလက်ထရောနစ်ကုန်ပစ္စည်း Shell က CNC ၏ processing အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အီလက်ထရောနစ်ကုန်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းများ CNC ထုတ်ယူခြင်း အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Wholesale Cnc မဂ္ဂနီစီယမ်အလွိုင်းအစိတ်အပိုင်းများ from China, Need to find cheap Cnc မဂ္ဂနီစီယမ်အလွိုင်းအစိတ်အပိုင်းများ as low price but leading manufacturers. Just find high-quality brands on Cnc မဂ္ဂနီစီယမ်အလွိုင်းအစိတ်အပိုင်းများ produce factory, You can also feedback about what you want, start saving and explore our Cnc မဂ္ဂနီစီယမ်အလွိုင်းအစိတ်အပိုင်းများ, We'll reply you in fastest.